Dessert ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် – YANGON STYLE
ကိုရီးယားDessert အရသာစစ်စစ်စားရမယ်ဆို ယုံမလား
ဆိုင်လေးက ဗိုလ်တစ်ထောင်မှာ ဆိုင်ခွဲအနေနဲ့ ဖွင့်ထားတာ မကြာသေးဘူး။ Dessert ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် နေရာကောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။ အခုဆိုင်လေးဆို အခုနောက်ပိုင်း မြင်တွေ့လာရတဲ့ မုန့်လုပ်တာကို ငေးကြည့်ခွင့်ရတာကလည်း သဘောကျစရာတစ်ခုပါပဲ။
ကိုရီးယားသံဇဉ်တွေနဲ့ စီးမြောမယ်ဆိုတဲ့သူတွေ၊ Date လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ ၊ ဓာတ်ဖမ်းချင်သူတွေနဲ့ ကိုရီးယား Dessert ကောင်းကောင်းစားချင်သူတွေ လာရောက်သင့်တဲ့ဆိုင်လေးလို့ပြောရပါမယ်။
Junction City မှာလည်းရှိပြီး Junction City ကဆိုင်မှာ 31.07.2020 ထိ Monday to Thursday ကို Any2Items ကို 10% ပေးထားပြီး Any3Items နှင့် အထက်ကို 15% Off ပေးထားတာပါပဲ
ဆိုင်နာမည်လေးက Rain Café ဖြစ်ပါတယ်။ Rain Café မှာ Desserts နဲ့ Hot Coffee, Ice Coffee, Frappe, Mojito, Smoothies နဲ့ Latte ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားစရာတွေ စုံပါတယ်။
ဆိုင်ထဲကနေ အပြင်ကို လှမ်းမြင်ရတဲ့ ရှုခင်းက ကြည်နူးစရာ။ အရသာတစ်ခုခြင်းကို ပုံလေးတွေအောက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
S’more Golden Toast 6000 Ks
Dessert ဆိုပေမဲ့ ဗိုက်အီတဲ့ Dessert မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဆုံး S’more Golden Toast ။ Icecream ကို အရသာ နှစ်မျိုးနဲ့ရတယ်။ အခုစားခဲ့တာဆိုရင် စတော်ဘယ်ရီအရသာပါ။ပေါင်မုန့်မီးကင်ကလည်း အထဲမှာနူးညံ့ပြီးတော့ ထောပတ်အနံ့လေးမွှေးနေတာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အရသာမျိုးပေါ့။ အသဲပုံ ဂျယ်လီလေးတွေလည်းပါသေးတာ။
Original Souffle Pancake 3600 Ks
Original Fruits Pancake ပါ။ တစ်ချပ် နှစ်ချပ် ကိုယ်စားချင်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး မှာလို့ရပါတယ်။ Green Tea နဲ့ စားခဲ့တာဖြစ်ပြီး စားရတာ နူးညံ့မှုရှိပြီး ပူတင်းနံ့လေးရပါတယ်။ အပေါ်ကဆမ်းထားတဲ့ Cream ကလည်း ကောင်းတယ်။ ပြင်ဆင်မှုကောင်းသလို လက်ရာကလည်း Top ပါပဲ။
Mojito Mango 4000 Ks
Mojito mango ကလည်း သရက်သီးနဲ့ Sodaနဲ့ လုပ်ထားတာ ချဉ်ချဉ်လေးဆိုတော့ Dessert နဲ့ ကွက်တိပါပဲ
Blueberry Latte 3800 Ks
Blueberry Latte မှာ Blueberry ကတော့ သောက်ဖူးသမျှထဲ အရသာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဒါကတော့ Sweet ဘက် နည်းနည်းသွားလို့ လျော့ခိုင်းရင် တော်တော်သောက်ကောင်းပါပြီ။ သူလည်း ရောက်ရင် must try ပါ။
အချိုမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေတောင် ဒီဆိုင်က Dessert တွေကတော့ Sweet ဘက်မသွားဘဲ လုံးဝ အဆင်ပြေပါတယ်။ Korea Made Dessert ကို Dessert ချစ်သူတွေ လာရောက်မြည်းစမ်းကြည့်သင့်တဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
No. 026, 3rd Floor, Junction City, Pabedan Tsp, Yangon
No. 237/ 239, Bo Myat Tun St, Near BEHS4 Puzundaung, Botahtaung Tsp, Yangon
Ph no : 01 8203955